I-Linhai Dedicated Courtyard Villa. I-Sunshine Big Bed 3, eseduze nesifunda sebhizinisi sase-Yantai University, eduze ne-Shilili, i-New World, kanye ne-Poly Mall Pedestrian Street
Yantai, Shandong, i-China
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-小七
I-villa yomndeni owodwa endaweni yevilla yolwandle, enegceke elisha lamaShayina, nendawo ethulile.
Kunamakamelo ezivakashi angu-13, ahlotshiswe ngesitayela selogi esincane, izingubo zokulala nezindlu zangasese ezikhethiwe zekhwalithi ephezulu, futhi afakwe iziliphu ezilahlwayo ezikhethiwe. Amanzi amahhala ekamelo lezivakashi amanzi asendaweni yase-Yantai asezintabeni, amnandi futhi amnandi. Ikamelo ngalinye lifakwe igumbi lokugezela elizimele namafasitela amakhulu. Ngayinye ifakwe umoya opholile, iziteshi ze-TV ze-inthanethi eziphelele, i-WiFi engu-100M yamahhala, isifudumezili samanzi sikagesi esizimele, amanzi ashisayo asheshayo, kanye nevolumu enkulu yamanzi eshawa. Indawo yomphakathi ivulekile, futhi kunesitolo sekhofi esitezi sokuqala, esihlinzeka ngekhofi, itiye, ama-dessert, njll. Ihholo lingahlalisa abantu abangu-20, lineskrini esingamayintshi angu-80, futhi lingasetshenziswa nomshini wokudlala olungele umhlangano wokwakha amaqembu. Kunekhishi endaweni yokwamukela izivakashi esitezi sokuqala.Izitsha zasekhishini ziphelele futhi zingasetshenziswa ngokuqokwa futhi zikhokhelwe.
Hamba amamitha angu-100 ukuya ogwini lolwandle, bukela ukuphuma kwelanga olwandle, futhi ufinyelele ogwini lolwandle ngemizuzu emi-2. Iqhele ngamamitha angu-800 ukusuka e-Yantai University kanye ne-Yanda Bath Spot, futhi iqhele ngamamitha angu-700 ukusuka endaweni yezitolo ye-New World Department Store. Kukhona indawo yokudlala yezingane eNew World. Izinto zokuhamba ezihamba phambili, ukudla okucebile nokuhlukahlukene, ukudla kwasolwandle, ibhodwe elishisayo, ukudla kwaseSichuan, izoso, izitebele zokudla... yonke into. Kukhona nemigwaqo emithathu yokudla okulula.
Ukufakwa kuhlu kuyindawo engcwele yokungena kosaziwayo be-inthanethi e-Yantai, lapho izitolo zosaziwayo be-inthanethi zihlangana khona kusihlwa, okuyinto enhle kakhulu.
Kunepaki enkulu yamahhala yezingane ebhishi ePuxi Bay eLonghu, okuyimizuzu engama-20 uma uhamba ngemoto.
Kukhona nebhishi elikhulu le-reef eliqhele ngamakhilomitha angu-2 ukusuka kule ndawo, lilungele ukubamba ulwandle uma igagasi liphansi, futhi nakanjani lizobuya nomthwalo ogcwele.
Indlu itholakala e-Yanda Commercial District, i-villa enegceke elilodwa, ethule phakathi komsindo. Ukuwela umgwaqo ngasolwandle, ulwandle lwangempela, indawo yokupaka ekahle.
Igceke lenziwe ngokukhethekile umklami, futhi amahlathi amabili e-bamboo enza igceke lonke libe nomoya womoya futhi lithule ngendlela engavamile. Inhlanganisela eyingqayizivele yesitayela se-Huizhou nesakhiwo sokhuni sihlakaniphe kakhulu. Indawo yomphakathi ebanzi ihlinzeka ngamathuba amaningi okubuthana kwabangane kanye nokwakhiwa kweqembu lenkampani.
Kunamakati amathathu abizwa ngokuthi u-Yudianer, u-Xiaoqi no-Tuoer, kanye ne-Shiba Inu encane ebizwa ngokuthi u-Baozi. U-Baozi ungumfana omncane, oshiseka kakhulu, uzogxuma lapho ehlangana nabantu abathandayo. UDa Bai Miao Yu Dian ungumphathi womndeni, kodwa ngowokuqala ukuncenga. Into yokuqala eyenziwa umuntu angamazi iwukucasha umsila wakhe uboshelwe phakathi kwabo.Lapho ezizwa engeyona ingozi kangako, uyolunguza ikhanda lakhe futhi abukele kude. U-Mei Short Tudou unohlobo oluhlukile lwesimo, okwenza abantu bacabange ukuthi muhle kakhulu, kodwa uyintombazane. USiam Xiaoqi ungowokuqala naughty, futhi ubuye abe ngowokuqala, ukushaya izandla ezingenakunqotshwa indlu yonke, futhi akesabi abantu abangabodwana noma ukulwa kwamaqembu. Kodwa induku yokuqala emndenini.Kungakhathaliseki ukuthi ikuphi, inqobo nje uma uyibiza ngokuthi Xiaoqi Xiaoqi, izontweza yonke indlela futhi igxumele ezingalweni zakho futhi ikuhlikihle.
Nakhona egcekeni kugcwele ama-succulents endaweni yezimbali.Ngenhlanhla abalandeli benyama babusiswe ngenhlobo yonke yabantu abadala. Kukhona nezitshalo ezihlukahlukene eziluhlaza egumbini lokuphumula, uphayinaphu engiwuthandayo womoya, i-Lithops, ama-pistachios nokunye.
Kukhona neshalofu lezincwadi eligcwele izincwadi. Uma ukhathele uhambo, akumele uye ndawo. Vele u-ode inkomishi yekhofi elisanda kumiswa egcekeni elincane ntambama, khetha incwadi oyithandayo, bese basibeka inkundla. Eceleni esinamanzi, ulalele umoya phezu ihlathi bamboo. Isidleke sekati siseduze kwakho, futhi amabhanisi amaShiba Inu amancane azungeza ngaphansi kwezinyawo zakho.
Lonke uhambo lufanele ubuhle. Emakhoneni nasemakhoneni ohlu, kukhona ezenziwe ngesandla ngumnikazi. Mzi wasekhaya, ake uhambe ezintabeni nasezilwandle, uphile ebudlelwaneni babantu.
Yehlisa ijubane, iminyaka iseyinde, futhi izintaba nemifula kusaphelele
Itholakala maqondana neQingquan Ocean (Ranch) Park, kukhona amaphrojekthi olwandle futhi ukutshuza kungabhukwa. Kunesitolo sekhofi esingu-㙻DO esiqhele ngekhilomitha elingu-1, isakhiwo esiyingqopha-mlando e-Yantai, esitezi sokuqala sendlu yesibani. Kungamakhilomitha angu-4 ukusuka eFisherman’s Wharf, 6km ukusuka eMpumalanga Fort, 10km ukusuka eYantai Mountain kanye nama-20km ukusuka eYangma Island. Kukhona amabhasi aqondile.
Kukhona ipaki enkulu yolwandle yezingane futhi yamahhala ekuhambeni kwemizuzu engama-20 ukusuka eLonghu Puxi Bay.
Kunezitobhi ezimbili zamabhasi eduzane, isitobhi sebhasi i-Yuhao Ihhotela kanye nesitobhi sebhasi i-Qingquanzhai zisemnyango wakho, oqhele ngamamitha angu-350 ukusuka endlini, okwenza kube lula ukuhamba.
U小七 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Yantai namaphethelo